Uzithele isibhaxu izikhulu umnikazi weMax's Lifestyle | isiZulu
Uzithele isibhaxu izikhulu umnikazi weMax's Lifestyle
Uzokhipha ingoma owesifazane owathi akazwani nephenti
UZodwa Wabantu uthi akasabazi ubuthongo
Durban - Ukhwele wadilika kwizikhulu zikahulumeni athi zibamba ngophondo intuthuko yabamnyama umnikazi wendawo yentokozo esiyaziwa umhlaba wonke iMax's Lifestyle uMax Mqadi.
Le ndawo eseMlazi esineminyaka eyi-18 yasungulwa, isanda kuvela ohlwini lwezindawo zokudla ezihamba phambili emhlabeni jikelele, iqenqeleza phambili ezwenikazi i-Africa yazuza nendondo ye-The Best Restaurant.
UMqadi ubekhuluma kwethulwa indawo entsha kuleli gceke lakhe elisanda kunwetshwa yokuphola nokuwasha izimoto esezingeni eliphezulu.
OLUNYE UDABA:Intandokazi yomculi Eyadini Lounge
Ukhwela edilika nje, kukhona noNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho KwaZulu-Natal uSihle Zikalala nezikhulu zoMnyango wezokuvasha kumasipala iTheku.
Bekulindeleke kube khona neMeya yaleli dolobha, uZandile Gumede kodwa obengabonwa nangokhalo nokuyinto engasamangazi emicimbini asuke elindelwe kuyo.
UMqadi uthi kunabathile kuhulumeni abadonsa izinyawo uma kumele kuthuthukiswe abamnyama njengoba kuyimanje uhulumeni umapeketwane ngenxa yomgomo we-Radical Economic Transformation.
"Angazi ukuthi yini le okuliwa nayo uma umnotho sekumele unikelwe kwabamnyama ngale-radical economic transformation.
"Kune-mfundisoze nje yezinye izinhlanga, abantu abamnyama abamunci amagazi abanye . Umcimbi wokuqala omkhulu obukele ndawo bekungoweSiyanqoba Rally kusaphushwa indaba kaMengameli uZuma.
"OZizi Kodwa noFikile Mbalula bebehlala la uma befika eThekwini, isabheda nale ndawo inamathoyilethe amabili nje. NoMalema ufakwe yibo la nokwenze le ndawo yagcina ibukeka njengendawo yentsha ye-ANC.
"Umuntu owangivula amehlo kulowo mcimbi ngubaba uCyril Ramaphosa nowathi kimina kumele ngibe phambili ngoba yindawo yami le.
"Okungiphatha kabi wukuthi nakuba isithuthuke kangaka le ndawo, yamela iTheku emhlabeni kodwa ngisenezingqinamba ezingaxazululeki. Abantu bamazwe omhlaba uma beseThekwini bafuna ukuza eMax's. Ngacela ukulungisa indaba yama-parking kudala kusaphethe uSuttcliff kumasipala nowaze wathumela abantu ukuzohlola indawo kodwa kuze kube namuhla akukaze kwenzeke lutho. Wahamba nini nje eThekwini?
"Sikhuluma nje sekwakhiwe inqwaba yenxanxathela yezitolo phambi kwami okuyiPhilani naKwaMnyandu kodwa mina ngisalwa eyama-parking. Ezobani lezi zitolo? La nje kamakhelwane kuneSulumane elakhayo kodwa angikakawutholi mina umyalelo ngama-parking.
"Ngisezinhlelweni zokwakha ihhotela la ngemuva, hhayi iB&B kodwa iBoutique Hotel kodwa nakhona ngiyavimbeka. Kangifuni imali kubona kodwa ngifuna imigudu okumele ngiyilandele ngoba ulwazi kasinalo singabantu abamnyama.
"Namanje ngisazama ukuqonda ukuthi uma kuthiwa uMax akasuswe la kusuke kuqondwe ukuthini ngoba sayilandela yonke imigomo, lasayina ibandla nomakhelwane.
"EGoli nje izivakashi zigcwele elokishini ngoba baqhakambisa i-domestic tourism kodwa la eThekwini sisalwa nje indaba yokulungiswa kwalo mgwaqo. Kade ngayikhuluma njalo indaba yawo,"kusho uMqadi egadla ephindelela ezikhulwini.
Ubonge wanconcoza kuPhillip Sithole ophethe ezokuvakasha kumasipala ngokuqhakambisa ukuhanjelwa kwamalokishi uma kunemicimbi abayixhasile.
Uphethe ngelokuthi uyamthemba kodwa uNgqongqoshe uZikalala neMeya uGumede ukuthi bazomlekelela kulezi zikhalo zakhe zeminyakanyaka.
UZikalala uthe nakuba kuyinto eyaziwayo ukuthi amalokishi ayakhelwe ukuxosha abamnyama eduze kwezizinda zomnotho kodwa manje inhloso wukuwathuthukisa, encoma noMqadi ngegalelo lakhe kulokhu.
Uthe njengoba kuza nezinhlelo ezinkulu njenge-World Economic Forum Africa ekuqaleni kukaNhlaba (May), ne-Tourism Indaba akumele zisale ngaphandle izindawo ezifana noMax's Lifestyle.